इन्टरनेट मार्फत WEB आय कर फिर्ताको फाइल कसरी गर्ने ग्याजेट समाचार
हामी भित्र छौ आय अभियान, त्यो डरलाग्दो क्षण आइसकेको छ जसबाट तपाईं भाग्न सक्नुहुन्न, कम्तिमा वर्षमा एक पटक। यद्यपि यस वर्ष २०१ 2019, मा आय २०१ 2018 यो पहिलो वर्ष हो कि कागज ढाँचामा प्रतिफल प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन, पहिलो पटक स्पेनले आय बयान गर्नका लागि एक मात्र संयन्त्रको रूपमा इन्टरनेटमा शर्त लगाइरहेको छ।
यद्यपि त्यहाँ केहि कम मानिसहरु छन् जुन अझै पनि यस प्रकारको संयन्त्रका साथ गम्भीर समस्याहरु छन्। हामी तपाईंलाई सिकाउन जाँदैछ कि कसरी सहज र चाँडो इन्टरनेट मार्फत आयकर रिटर्न फाइल गर्ने ताकि तपाईंलाई मार्गमा कुनै कठिनाई सामना नहोस्। सधैं जस्तो, हामी तपाइँको लागि सबै भन्दा राम्रो गाइड ल्याउँछौं।
1 मँ आयकर रिटर्न अनलाइन फाइल गर्न के चाहिन्छ?
2 मैले कसरी आयकर रिटर्न गर्नु पर्ने हुन्छ
3 कसरी आयको कर डेटा परामर्श गर्न को लागी
4 २०१ In आय मार्गनिर्देशन
मँ आयकर रिटर्न अनलाइन फाइल गर्न के चाहिन्छ?
त्यहाँ छन् तीन सम्भावित संयन्त्र आयकर रिटर्न अनलाइन फाइल गर्नका लागि, हामी तपाईलाई यी विधिहरू क्रमशः प्रत्येक चरणको कुन चरणमा प्रयोग गर्नुपर्दछ भनेर विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नेछौं।
इलेक्ट्रोनिक प्रमाणपत्र वा DNIe को साथ: जोसँग पहिले नै आफ्नो इलेक्ट्रोनिक प्रमाणपत्र छन् पहिले चीजहरू भन्दा पहिले सजिलो छ, तपाईंलाई थाहा छ, डिजिटल प्रमाणपत्र FNMT मार्फत प्राप्त गरिएको छ, यसलाई प्राप्त गर्नका लागि तपाईले केवल निर्देशनहरूको पालना गर्नुपर्दछ। यो लिंक, यसलाई ब्राउजर मार्फत अनुरोध गर्नुहोस् र राष्ट्रिय क्षेत्रभरि यसको लागि सक्षम गरिएको कुनै पनि अफिसहरूमा आफूलाई पहिचान गर्नुहोस्। तपाईं त्यसपछि प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न आफ्नो उपकरणमा फिर्ता जान सक्नुहुन्छ। साथै हामी DNIe प्रयोग गर्न सक्छौं यदि हामी सँग एक अनुकूल कार्ड रिडर र सुरक्षा कुञ्जी हाथ मा छ।
Cl @ ave PIN को साथ: यो धेरै जसो प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्ने प्रणालीहरू मध्ये एक हो। एक Cl @ ave PIN प्राप्त गर्न हामीसँग तीन सम्भाव्यताहरू छन्: एन्ड्रोइड वा आईओएस मोबाइल उपकरणहरूको लागि अनुप्रयोग मार्फत (लिङ्क); मोबाइल फोनमार्फत एसएमएस प्राप्त गर्दा यदि हामीसँग ट्रेजरी डाटाबेसमा दर्ता गरिएको फोन छ; वा हाम्रो टेलिफोन नम्बर र हाम्रो केही कर जानकारीको साथ छिटो Cl @ ave पिन कार्यक्रममा दर्ता गरेर (लिङ्क)। यो छिटो र सब भन्दा टिकाऊ हो यदि हामी डिजिटल सर्टिफिकेट अनुरोध गर्ने परीक्षाको बीचमा जान चाहँदैनौं।
सन्दर्भ संख्या मार्फत: सन्दर्भ संख्या अघिल्लो वर्षको आय डेटा प्रयोग गरेर प्राप्त गरियो, साथै केहि अनुरोध हुन सक्छ। हामी सन्दर्भ नम्बर प्राप्त गर्न सक्दछौं बक्स 4745 XNUMX using को प्रयोग गरेर गत बर्षको फिर्ती यस मार्फत लिङ्क वा जहिले जहिले पनि, Cl @ ave PIN वा डिजिटल प्रमाणपत्र मार्फत। एकचोटि हामीले यसलाई प्राप्त गरेपछि, कोड प्रविष्ट गर्नाले हामीलाई पहुँच गर्न अनुमति दिनेछ।
मैले कसरी आयकर रिटर्न गर्नु पर्ने हुन्छ
आय विवरण बनाउनको लागि हामीले ट्याक्स एजेन्सीको इलेक्ट्रोनिक हेडक्वार्टरमा जानु पर्छ। यो गर्न, केवल प्रविष्ट गर्नुहोस्: www.agenciatributaria.es र सर्टकटको «Income» आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्, वा बाट इलेक्ट्रोनिक कार्यालय को सेक्सन भित्र फिचर गरिएको अभियानहरू, जहाँ हामी सम्बन्धित आय अभियान पाउनेछौं।
सबै प्रक्रियाहरू जुन यसले हामीलाई पूरा गर्न अनुमति दिन्छ, एउटा हामीले हामीले चयन गर्न लाग्यौं कि हामी के चाहान्छौं त्यो इन्कम डिक्लेरमेसन हो किनकि हामीसँग पहिले नै हामीले गर्नुपर्ने सबै डाटा यसैले छन्: ड्राफ्ट / घोषणा प्रसंस्करण सेवा (आय WEB)।
जब हामी यसमा क्लिक गर्दछौं त्यसले हामीलाई सोध्छ हामी पहिचान गर्छौं कुनै पनि तीन सम्भावित विधिहरू मार्फत र हामी विन्डोमा जान्छौं भाडा सेवाहरू। सबै सम्भावित विकल्पहरू मध्ये हामीले एउटा मध्ये एउटा छनौट गर्नुपर्दछ ड्राफ्ट / घोषणा (WEB आय) र हामी स्वचालित रूपमा आम्दानी विवरणको लागि डेटा प्रविष्टि प्रणाली खोल्नेछौं, अबदेखि तपाईंले केवल उचित डेटा भर्नु जारी राख्नुपर्नेछ र सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ कि तिनीहरू प्रस्तावित मस्यौदामा सहि छन्।
जब हामी योसँगै सम्पन्न हुन्छौं सेक्सन in मा माथी दायाँ कुनामा क्लिक गर्नुहोस्।वक्तव्य सारांश » र त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् "कथन बुझाउनुहोस्" यदि हामी परिणामसँग सन्तुष्ट छौं।
कसरी आयको कर डेटा परामर्श गर्न को लागी
आय विवरण बनाउनको लागि कर डेटा जाँच गर्नु एकदम सजिलो छ, हामीले गर्नै पर्ने पहिलो कुरा भनेको इन्टर हो यो लिंक, त्यसो भए हामी विकल्प छनौट गर्नेछौं "तपाइँको कर विवरणहरू जाँच गर्नुहोस्" कर प्रक्रियाहरू सेक्सन भित्र। अब यसले हामीलाई मार्गदर्शनको सुरूमा वर्णन गरेको कुनै पनि तीन सक्षम विधिहरूसँग आफूलाई पहिचान गर्न फेरि सोध्छ।
त्यसोभए सम्बन्ध एक तालिकाको रूपमा प्रदर्शन हुनेछ जुन हाम्रो कर डाटा दुबै कामबाट हुने आयको सन्दर्भमा हो र ती आर्थिक वा व्यावसायिक गतिविधिहरूको परिणाम स्वरूप आर्जित गरिएको हो। यो सँधै लिखित रूपमा लिनु र यी ट्याक्स डाटालाई ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ यी आय विवरणको सारांशमा जाँच गर्न कि तिनीहरूलाई सही रूपमा सूचित गरिएको छ। यसमा र यसैले हामी हाम्रो घोषणामा कुनै पनि प्रकारको जानकारीलाई बेवास्ता गरिरहेका छैनौं।
२०१ In आय मार्गनिर्देशन
यी केहि हुन् प्रश्न र उत्तर यस हालको बर्षको आय विवरणको बारेमा द्रुत जानकारी।
२०१ long को आम्दानी मैले कति लामो गर्नुपर्नेछ? २०१ 2018 आयकर रिटर्न यस वर्षको अप्रिल to देखि जुलाई १ सम्म बुझाउन सकिन्छ।
म मद्दतको लागि ट्रेजरीमा जान सक्छु? वास्तवमा, तपाईले सेक्शन इनकम २०१>> अपोइन्टमेन्टमा अर्को जून २ June, २०१ 2018 सम्ममा भेट्न सक्नुहुन्छ। पहिलो नियुक्ति मे from देखि दिइन्छ, निम्नलिखित मे १ on मा प्रतिनिधिमण्डलमा जानका लागि।
के म कर फिर्ताको अधिवास परिवर्तन गर्न सक्छु? वास्तवमा, आय २०१ 2018> मार्फत IBAN खाता परिमार्जन गर्नुहोस्।
म कसरी मेरो आय कर फिर्ताको स्थिति जाँच गर्न सक्छु? धेरै सजिलो छ, तपाइँ www.agenciatributaria.es प्रविष्ट गर्नुहोस्, चयन गर्नुहोस् इलेक्ट्रोनिक कार्यालय, एक चोटि पहिचान गरीएको खण्ड छनौट गर्नुहोस्: मेरो फाईलहरू> करहरू र शुल्कहरू> व्यक्तिगत आयकर र त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको फिर्ती के अवस्था हो र फिर्ता सम्म कति समय लाग्छ।
यो कत्तिको सजिलो छ तपाईं आफ्नो आय कथन बनाउन सक्नुहुन्छ धेरै जटिलता बिना र ईन्टरनेटको माध्यमबाट तपाईंको धेरैजसो समय बनाउँछ। यदि तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, टिप्पणी बाकस यो जम्मा गर्नको लागि एक आदर्श स्थान हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » इन्टरनेट मार्फत WEB आयकर फिर्ताको फाइल कसरी गर्ने